Vono olona miharo fandrobana: voasambotra ilay dahalo niova fo - ewa.mg
News - Vono olona miharo fandrobana: voasambotra ilay dahalo niova fo
ny polisy avy ao Ambohimahasoa, ny zoma lasa teo tao Tsarafidy, i
Faradaly, 42 taona. Voarohirohy amin’ny famonoana mpiara-miasa
amin’ny solombavambahoaka ao an-toerana izy. Voasambotra taorian’ny
fitoriana nataon’ny fianakavian’ireo mana-manjo sy ny fitarainan’ny
fokonolona izy. Fantatra fa dahalo niova fo ralehilahy ary
tapa-kevitra fa tsy hanao intsony ny fomba ratsy raha nahare ny
antso avo avy amin’ireo tompon’andraikitry ny filaminana tamin’ny
taona lasa. Taty aoriana anefa, niova hevitra ralehilahy ka nanohy
asa ratsiny. Niverina amin’ny asa fanaony toy ny halatr’omby sy ny
vono olona ity voasambotra. Tsiahivina fa tompon’antoka sy nandray
anjara tamin’ny famonoana ny « assistant parlementaire »
an’ny solombavambahoaka izy, ny 22 jona lasa teo. Maty voatifitry
ny mpitandro filaminana kosa ireo namany roa hafa ny volana jolay
sy aogositra teo. Lehilahy roa hafa kosa mbola karohina
ankehitriny. Fantatra fa balana basy mahery vaika miisa enina no
nitifiran’ireo olon-dratsy ilay « assistant
parlementaire ». Tratra tany amin’ireo jiolahy maty voatifitra
ilay basy taorian’izay.
Ankoatra izay, olona miisa 21 hafa
hiakatra fampanoavana androany ao Ambohimahasoa tamina raharaha
vono olona tamin’ny 22 novambra 2018.Voarohirohy tamin’ny
halatr’omby sy ny famonoan’olona roa ireo voasambotra. Taorian’ny
tranga, nitsoaka nihazo an’i Toliara ireo voasambotra.
L’article Vono olona miharo fandrobana: voasambotra ilay dahalo niova fo a été récupéré chez Newsmada.
Haintrano tetsy Ankadifotsy: tsy tafavoaka, maty kilan’ny afo ilay rangahy lehibe
Mainty vao maraina ny rahona teny Ankadifotsy. Nitrangana haintrano teny an-toerana, omaly maraina tokony ho tamin’ny 6 ora sy 30 minitra. May tamin’izany ny trano miisa telo nahitana sekoly, trano gasy lehibe misy rihana iray ary trano biriky misy rihana roa. Lehilahy iray 85 taona koa tavela tao amina efitrano niharan-doza ka maty tsy tra-drano. Tsy mbola voafaritra, hatreto, ny niandohan’ny afo, raha ny fanazavan’ny sampana mpamonjy voina. Ao kosa ireo milaza fa « cours-circuit » ny nitarika ny afo. « Tsy nahita ny niandohan’ny afo izahay fa mbola natory. Henonay kosa fa nisy zavatra nipoapoaka tao amin’ilay tafon-trano ka noheverinay fa vorona. Tampoka, nivoaka izahay, ny lelafo nirehitra no hitanay teo amin’ilay trano gasy eto akaikinay », hoy ny fanazavan’ireo tompon-trano, may trano. Niitatra tamin’ny trano hazo anilan’ilay trano gasy ny afo. Vokany, kila forehitra ny trano sy ny fitaovana tao anatiny ary mbola niitatra tamina trano biriky iray misy rihana roa ny afo. « Rehefa nivoaka avokoa izahay, nahatsikaritra fa samy teo daholo ny rehetra ankoatra an’i Dadabe », hoy hatrany ireo niharam-boina.Fotoana fohy taorian’ny tranga, tonga teny an-toerana ireo mpamonjy voina. “Nanano sarotra ny famonoana ny afo”, hoy ny mpamonjy voina. Niara-niisalahy anefa ny mponina nanampy azy ireo. « Nanao ny ezaka rehetra ny mpamonjy voina tamin’ny famoahana ilay raiamandreny, saingy efa may tanteraka ny gorodona tao amin’ilay efitrano ambony rihana nisy azy », hoy ny fanazavan’ny lietnà Kly Razafimanahaka Tiana, lehiben’ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalàna.Tamin’ny 8 ora maraina vao voafehy ny afo ary levona tanteraka izany ora iray taorian’izay. Tamin’izany indrinda no nahitana ilay rangahy lehibe efa tsy nisy aina intsony. Henintsoa HaniL’article Haintrano tetsy Ankadifotsy: tsy tafavoaka, maty kilan’ny afo ilay rangahy lehibe a été récupéré chez Newsmada.
Asan-dahalo :: Olona telo maty voatifitra tany Bekily
Namoy ny ainy vokatry ny tifitra nataon’ireo dahalo naka ny ombiny i Vazahamena, lehilahy lehiben’ny kartie iray tany Belamonty-Tanandava any Bekily, tamin’ny 20 aogositra lasa teo tokony tamin’ny 10 ora alina. Sahy nifanatrika nifampitifitra tamin’ireo zandary ao amin’ny Vondrona miady amin’ny dahalo na ny Usad ireo voatondro fa dahalo tao amin’ny kizo iray ireo. Namoizaina ain’olona roa hafa io fifandonana io. “Nifankahita teo amin’ny kizo iray tao Antsary-Benato, ao amin’ny kaominina Beraketa ireo olona nanara-dia nampian’ireo zandary, taorian’ny dia an-tongotra ora maro. Nisy ny fifampitifirana satria tsy nanaiky fa namaly tifitra nisesisesy ireo dahalo. Hita faty ny roa tamin’ireo dahalo taorian’izay. Nitsoaka ireo namany. Nosavain’ireo mponina ny manodidina ny toerana nisian’ity fifampitifirana ity ka hita tao avokoa ireo omby miisa enina amby efapolo very tany Belamonty”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana. L’article Asan-dahalo :: Olona telo maty voatifitra tany Bekily est apparu en premier sur AoRaha.
Taona 2021: ho tia ny kolontsainy ny Malagasy?
« Tsy tonga ho azy ny fitiavan-tanindrazana fa mila hambolena », hoy ny mpandinika fiarahamonina iray. Voalazany fa « anisan’ny mampitsimoka izany ny finiavana hahalala ny kolontsaina ». Raha io no ao amin’ny Malagasy tsirairay, hiverina ny fitiavan-tanindrazana ao aminy. « Na ny fiantsoana ireo ray aman-dreny niteraka amin’ny anarana « Ikaky sy Ineny », fotsiny aza, no vitan’ny taranaka malagasy, efa zava-dehibe ny fiantraikan’izany raha oharina amin’ny fiindramana ny « papa sy maman » ».Raha ny filazan’ny mpandinika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena indray: « hisy zavatra maro hiova manomboka izao. Anisan’izany ny fitodihana any an-doharano ». Asa raha mba ho tafiditra ao anatin’izany ny Malagasy na mbola ho tamana ao anatin’izao « kisarintsarim-pahalalana » izao?HaRy Razafindrakoto L’article Taona 2021: ho tia ny kolontsainy ny Malagasy? a été récupéré chez Newsmada.
Namoaka ireo zava-bita tsara sy misongadina indrindra maneran-tany eo amin’ny baolina kitra, omaly, ireo manampahaizana any ampitan-dranomasina. Nahafaly ny mpamaky ny tambajotran-tserasera ny nahita fa anisan’ireo tafiditra ao anaty «record mondial» ny voka-dalaon’ny AS Adema sy ny Stade Olympique de l’Emyrne (SOE), notanterahina ny volana oktobra 2002. Nahamenatra anefa ny nahita izany satria tsy mba zavatra tsara fa nanome sary ratsy ny baolina kitra malagasy. Raha tsiahivina, nahatratra 149 no ho 0 ny isan’ny baolina maty ka nivoaka ho mpandresy ny Adema. Lalao nanehoan’ireo mpilalaon’ny Stade Olympique de l’Emyrne ny tsy fahafaliany tamin’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Federasiona malagasy (FMF), tamin’izany fotoana izany. Tsy azo kosehina intsony anefa izany fa efa mipetraka ao anaty “Guiness de record”.Mifanohitra amin’izany kosa ny an’ireo kalaza any ivelany satria i Alex Ferguson no mpanazatra manana ny anaram-boninahitra be indrindra nahazoany amboara 49. Ilay Alemà, i Mesut Ozil, kosa ny mpilalao nahavita tolotra tsara indrindra tamin’ny “Premier League », ny “Bundesliga”, ny “Liga”, ny “Europa League”, ny “Ligue des Champions”, ny “Euro” ary ny “Coupe du Monde”. Mbola teratany alemà ihany koa ny mpamono baolina be indrindra tamin’ny fiadiana ny amboara eran-tany, nahafaty baolina 16. Tompondaka L’article Kitra: «Record mondial» ny lalaon’ny Adema sy ny Stade a été récupéré chez Newsmada.